Tsy miady mba hanaporofoana ny fomba marina isika, hanadino fa ny olo-marina dia tsy izay tonga Jesosy ho an'ny. Matt 9:13
Fiainana iray Share Izany
3 Fomba Deny an'Andriamanitra
Efa nandà ny Andriamanitry ny Izao Rehetra Izao? Mino izany na tsy, izany no fanontaniana manan-danja ho antsika rehetra mba hieritreritra. It’s clear in Scripture that eternal life is freely...
Fa ny Kristianina, ny fanontaniana dia tsy na tsia dia hiatrika fakam-panahy isika, fa ahoana no mamaly rehefa manao. ao amin'ny Lioka 4:1-2, we read about the temptation of Jesus and how...
Vitsy ny zavatra izay manaitra lalina tao am-poko toy ny rehefa nandre an'i Jesosy ny Kristianina vaovao - na ny Kristianina - manao fiekem-bahoaka ny finoany amin'ny alalan'ny batisa. I think of...
Ahoana no marina eo anatrehan'Andriamanitra?
Ahoana no olo-marina eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra? Izany dia mitovy marina tokoa amin'ny fanajana izay Kristy dia mpanota. Fa Nihevitra amin'ny fomba ny toerana, that he might...